Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elinomnyango ophumela ngaphandle kwilali epholileyo. - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elinomnyango ophumela ngaphandle kwilali epholileyo.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLucy
Igumbi elivulekileyo elinomnyango ophumela ngaphandle elinamagumbi okuhlambela abucala kwindlu entle ebuyiselweyo yenkulungwane yesithandathu. Ibhedi enkulu etofotofo kakhulu nendawo ethe cwaka ebusuku yenza le ndawo ibe yindawo entle yokuphumla. Indawo entle, eneBedarieux exakekileyo ekumgama wemizuzu eyi-10 kuphela xa uhamba ngemoto. Ilungele abantu abahamba ngeenyawo, abakhweli beebhayisekile (indawo yokugcina ekhuselekileyo), ababhali kunye namagcisa. Ababuki zindwendwe abanobuhlobo.
Umgangatho omhle, indawo yokuhlala etofotofo kwipaki yelizwe yaseHaut Languedoc, ummandla omhle nongacetywanga eFransi. Igumbi likhulu ibe linebhedi enkulu. Igumbi lokuhlambela, elinegumbi lokuhlambela elikhulu, likwigumbi lokulala ibe ikhitshi ngumnyango olandelayo egadini. Ikhitshi lelakho wedwa ibe liza kusetyenziswa nguwe wedwa. Inefriji enebhokisi encinci yomkhenkce, iketile, i-toaster, ioveni encinci nazo zonke izixhobo zasekhitshini ozidingayo. Ukuba kukho into oyifunayo engekho ekhitshini, ungenzi ngxolo, uze ubuze - sinayo yonke into! Kodwa ukuze le nto icace gca, igumbi lokuhlambela lingaphakathi kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle kodwa ikhitshi ligumbi elahlukileyo elikumgama weemitha eziyi-2 kuphela. Inkundla entle inetafile nezitulo onokuzisebenzisa ukuba ungathanda ukutya okanye ukusela phandle. Ibala kunye nendawo yayo yokuhlala zikhuselekile kakhulu kumabhayisekile. Le lali ihleli kumjikelo weendlela ezimbini eziphambili zeHerault.
Le lali ngokwayo ithe cwaka, kwaye akukho zinto zihambayo, ngoko yindawo entle yokudlala izilwanyana kunye nabantwana. Ukufutshane neendawo ezikufutshane nelizwe ezithi ndijonge ukuya kutsho elwandle nakwiiPyrenees ezinekhephu. Ukunyuka intaba kunye nokundwendwela ifama kokubini kunokwenzeka kwilali ngamalungiselelo.
Ichibi elikhulu lokuqubha nokuloba likumgama wemizuzu elishumi xa uhamba ngemoto. Kubantu abaqubhayo basendle, iGorges d 'Heric emangalisayo iyihafu yeyure ngemoto, apho unokuchitha imini yonke emanzini aqaqambileyo uze ulale ematyeni afudumeleyo.
Unxweme yimizuzu emihlanu xa uqhuba.
Idolophu yasekuhlaleni (zonke izinto ezinokusetyenziswa) ikumgama weekhilomitha ezisibhozo/imizuzu eyi-10 ngemoto. Imarike enkulu ngeMigqibelo, imarike yezinto eziphilayo ngeMigqibelo.
Iindawo ezininzi ezinomtsalane zaseMontpellier zikumgama wemizuzu eyi-, apho ipaki eyonwabisayo kunye nenkqubo yokukhwela i-tram iza kukusa kwiziko elivuyisayo.
IBeziers, kunye nemarike yayo yama-Arabhu, icawa entle kunye nezitrato ezixakekileyo, ikumgama wemizuzu eyi- ngemoto.
Kukho izidiliya ezininzi ezintle nezifudumeleyo.
Ukutya kwale ndawo kukhetheke kakhulu kwaye zininzi iivenkile zokutyela ezibonisa umdlalo wokutya kwaselwandle kunye nokutya kwaselwandle okudume ngeLanguedoc. Sisoloko sikuvuyela ukuthetha kakhulu ngokutya newayini nokucebisa.
Ukutya ngamalungiselelo (isidlo sakusasa esiyi- € 6pp, isidlo sangokuhlwa esi-3 esinewayini/iziselo ezithambileyo € 21pp) .
Sikhupha imiyalelo epheleleyo xa ufika kodwa khumbula ukufumana i-WiFi ephakathi uze ufake iphasiwedi ngaphambi kokusebenzisa i- _ext_for the suite, okanye iza kuzama ukusebenza ngokuthe ngcembe! Ukungena kwiakhawunti nephasiwedi, kunye nedilesi yethu epheleleyo kunye nabantu esinxibelelana nabo ziqukiwe kwiinkcukacha zakho zokubhukisha. Khangela icawa kunye nendlu, kwaye awunakuphoswa sithi.
Nceda wazi ukuba akunakwenzeka ukuba ubhalise xa ufika ngaphambi kwexesha. Ngenxa yokuba siyilali ethe cwaka kakhulu siyavuya, sisoloko sivuya, ukuba abantu baphumle baze balale emva kwexesha, kodwa sidinga ixesha lokuhlamba nokucofa, size senze igumbi libe lihle phakathi kweendwendwe. ULucy uyafumaneka kwi-imeyile kwaye uphendula ngokukhawuleza. Nceda ungahambi kwizindlu zabamelwane ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu awukwazi ukumfumana. Ayifanelekanga ilali epholileyo.
Izinto ezihlaziyiweyo zehlobo lika-2021:
Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga ngaphandle kokuba zilungiswe ngokuthe ngqo kwangaphambili kwaye sisilwanyana esinye kuphela. Abanikazi bezilwanyana zasekhaya abanobubele nabanobubele bahlala bamkelekile.
Singakucela ukuba uvelane nendlu nakwilali. Yintsapho ethandekayo ibe sonke simele siyihloniphe.
Ukuba wophula iglasi yekomityi, asikhathazeki, loo nto iyenzeka, kodwa nceda wenze konke okusemandleni akho ukuba ungachithi izinto phantsi okanye kwiitafile. Yonke ikofu kufuneka ingene kumgqomo, okanye kumgqomo womgquba, kungekhona esinkini. Ukuba uyenzile le nto, yi-10 yeeYurophu esinokuyicoca.
Ukuba uchitha izinto egumbini, ziyi-50 yeesenti zexesha lethu neendleko zokuyicoca.
Ukuba unenja kwaye ayicocekanga - eyona nto ifunekayo - yi-50 yeeYuro nganye kunye nee-uro eziyi-250 ukuze iingcali ziye ukuba zingcolile.
Nceda uphathe indlu yethu ngendlela othanda ngayo eyakho.
4.88 · Izimvo eziyi-130
Idolophana yethu esezintabeni yenye yeendawo zakudala ezakhiwe kwimodeli ye-bastide. Izolile, ithule kwaye inyuke kakhulu kwimbali. Imbonakalo evela kwilali iyabukeka kwaye kukho uhambo olumnandi okanye olunzima kuzo zonke iiflethi.
Siza kuba kwisakhiwo kwaye sihlale kwindlu enkulu. Indawo yokuhlala yeendwendwe ikumgangatho osezantsi ibe isetyenziswa nguwe wedwa, nangona siza kudlula ebaleni emini. Uza kuba nezitshixo zakho zegeyithi enkulu ibe zonke zikhuselekile. Siyakuvuyela ukunxibelelana, kwaye sisoloko sikulungele ukucebisa ngendawo kunye nezinto ezinomtsalane, kodwa iindwendwe ziza konwabela ixesha lazo lokuzikhupha, zingathethi nathi!
ISAZISO esinobubele: Nceda usixelele ukuba uza nesilwanyana sasekhaya (izilwanyana zasekhaya ezininzi azivumelekanga). Zizilwanyana zasekhaya EZICOCEKILEYO NEZIPHETHWE KAKUHLE kuphela ezivumelekileyo, kwaye siza kubanga i- € 50 nge-Airbnb kuzo zonke iimeko ezingcolileyo. Inja yethu ayivumelekanga kwindawo yokuhlala yeendwendwe. Sukuzisa isilwanyana sakho ukuba asikwazi ukuthembeka kude nekhaya.
Siza kubanga nazo zonke iimeko zamabala okanye umonakalo kwiikhaphethi okanye kwitafile yokutyela, apho kukho iimethi.
Siza kuba kwisakhiwo kwaye sihlale kwindlu enkulu. Indawo yokuhlala yeendwendwe ikumgangatho osezantsi ibe isetyenziswa nguwe wedwa, nangona siza kudlula ebaleni emini. Uza kuba ne…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carlencas-et-Levas